Ninkii dhirbaaxay madaxweynaha Faransiiska oo shaaciyey sababtu ficilkaas u sameeyay+Xukun lagu riday | Qaran News
Ninkii dhirbaaxay madaxweynaha Faransiiska oo shaaciyey sababtu ficilkaas u sameeyay+Xukun lagu riday
Writen by Qaran News | 2:58 am 11th Jun, 2021
Ninka ku eedeysan in uu dharbaaxay madaxweynaha Faransiiska, Emmanuel macron, ayaa la horgeeyay maxkamad, maanta.
Ninkan oo 28 sano jir ah, ayaa maxkamadda ka hor qirtay in uu Macron dharbaaxay, wuxuuna ficilkaas ku sifeeyay daqiiqad shucuur kacsanayd ah oo uusan horey u soo qorsheysanin.
Wuxuu tilmaamay in dhacdada ay ka dhalatay hoos u dhaca Faransiiska ku yimid, sida uu maxkamadda ka hor sheegay.
Dacwad-oogaha maxkamadda ayaa codsaday in ninka oo lagu magacaabo Damien Tarel, lagu xukumo 18 bilood oo xabsi ah, wuxuuna dharbaaxada ku tilmaamay “ficil rabsho oo si ulakac ah loo sameeyay”.
Waaxda dacwadda ku oogeysa ninkan ayaa ku adkeysaneysa in uu taageersan yahay siyaasadda Midigta-Fog, uuna aad ugu dhowyahay dhaqdhaqaaqa ‘yellow-vest’.
Mr Macron ayaa horey u sheegay in ay tahay inaan la fududeysanin weerarka, si dhexdhexaad ahna loo eego.
Madaxweynaha Faransiiska markii la dharbaaxayay wuxuu ka soo baxay iskuul ku yaalla magaalada Waqooyiga-Bari ee Tain-l’Hermitage, ka dib ayuu ku leexday dad banaanka ku sugnaa oo lagu celiyay xeyndaan gaaban oo bir ah.
Ninka Macron dharbaaxay waxaa la maqlay in uu ku qeylinayay “Montjoie iyo Saint-Denis! Ha dhoco Macron”, waana ereyo la adeegsan jiray dagaalladii qarniyadii dhexe.
Qoraalka sawirka,Madaxweynaha Faransiiska oo maanta la kulmay ciyaartoyda xulka qaranka dalkiisa ka hor inta aysan furmin ciyaaraha Euro. Wuxuuna markale ka hadlay dhacdadii dharbaaxada.
Dhacdadaas waxaa cambaareeyay siyaasiyiinta Faransiiska, iyadoo tartanka doorashada madaxtinimada ay ka dhiman wax ka yar hal sano.
Isla goobtii madaxweynaha lagu dharbaaxay waxaa laga xiray nin kale oo isku magaalo ay yihiin Damien Tarel, wuxuu wajahayaa dacwad ku saabsan in uu haystay hub sharcidarro ah oo laga helay gurigiisa oo la baaray ka dib dhacdada.
Muxuu maxkamadda u sheegay ninkan?
Sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee faransiiska, AFP, ninkan waxaa la horgeeyay maxkamad ku taalla magaalada Valence, isagoo weli xiran funaanaddii uu qabay markii madaxweynaha uu dharbaaxayay.
Waxaa la weydiiyay sababta uu madaxweynaha u dharbaaxay, wuxuuna ku jawaabay in xilli uu sugayay saaxiibbadiisa, uu ku fakaray in uu sameeyo wax la xusuusan karo.
Wuxuu tilmaamay in uu fikirkiisii hore ahaa in uu kareem ama ukun ku tuuro, balse wuxuu ku adkeystay in uusan ka fikirin in uu madaxweynaha dharbaaxo.
“Markaan arkay sida uu u furfuran yahay oo si been ah, taas oo dhib igu ahayd codbixiye-ahaan, waan ka lalabooday,” ayuu ka yiri maxkamadda horteeda, sida warbaahinta ay qorayaan.
Isagoo dhalleeceynayay siyaasadaha madaxweynaha, wuxuu sheegay in uu qeyb ka ahaan bannaanbixii Macron ka dhanka ahaa ee la baxay ‘jaakadda-jaalaha ah’ kaas oo dhacay xilligii uu ku cusbaa xilka madaxweynanimo.
“Si dareen leh ayaan ficilka u sameeyay,” ayuu yiri.
Muxuu Macron ka yiri dharbaaxada lagu dhuftay?
Madaxweynaha Faransiiska, wuxuu horey u beeniyay in ficilkaas uu yahay mid qof keligii uu sameeyay. Isagoo hadalkaas xoojinaya wuxuu ku tilmaamay in”dadka rabshadaha badan” aan loo ogolaanin in ay afduubaan waxa ay shacabka ka doodayaan.
Shirjaraa’id oo maanta uu qabtay ayuu ku sii faafaahiyay dhacdadaas. “Waxaa jiray marxalado xiisad sare iyo qalalaase uu dalkan soo maray oo madaxweyne ahaan aan u joogay, xilligii qalalaasihii ‘gilets jaunes’. Balse bulshada heerkaas way ka soo gudubtay.”
Wuxuu tilmaamay in isaga shaqsi ahaan uusan sharciga la tiigsan doonin ninkaas, arrintaasna uu u daayay hannaanka cadaaladda.